Namaste Fm 107.2 MHz १८ बर्षपछी पुनः शालीकको अनावरण
खेमराज सापकोटा ,
खोटाङको जनतेढुङ्गा गाँउपालीकाको चिसापानी बजारमा जननायक बिपि कोइरालाको शालीक अनावरण गरीएको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय माहामन्त्री डा. शसांक कोइराला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडैलले संयुक्त रुपमा शालीकको अनावरण गर्नुभएको हो ।
कार्यक्रममा डा. शसांक कोईरालाले पाटी भीत्र रहेका गुट उपगुटको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले पाटीभित्रका सम्पुर्ण गुटउपगुटलाई एकताबद्ध ढङगले अगाडी बढाएमाा नेपाली कांग्रेस पहिलो स्थानमा आउने बताउनुभएको छ । कांग्रेसको योजना नेपाललाइ समृद्ध पार्ने रहेको बताउदै पार्टीले देश र जनताकोलागी धेरैकाम गरेको र अर्को चुनावमा कांग्रेस जसरी पनि पहिलो हुनेमा कार्यकर्तालाइ ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभएको छ ।
यसैबिचमा नेता प्रदिप पौडेलले नेकपाको एकता देशको ढुकुटीलाइ बाँडीचुडी खानेमेलोमात्र भएको आरोप लगाउनुभएको छ । कार्यक्रमलाइ सम्बोधन गर्दै उहाँले सन्सारमै दुई पार्टी अध्यक्ष रहेको देश नेपालमात्रै भएकाले प्रचण्डले आफु प्रधानमन्त्री बन्न ओलीलाई उचालेको समेत आरोप लगाउनुभएको छ ।
चिसापानी बजारको बिच भागमा शालीकको निर्माण गरीएको हो । उक्त स्थानमा बि.स. २०५४ सालमा पनि स्व. गिरीजा प्रसाद कोइरालाले शालीकको अनाबरण गर्नुभएको थियो । तर शशस्त्र द्धन्द्धको समयमा खम्वुवान समुहले शालीक भक्ताएका थिए । भक्ताएपछि काँग्रेसले लामो समयपछि पुन ः शालीकको निर्माण गरेको हो । शालीक निर्माण गर्न ३ लाख बराबरको खर्च लागेको र सो खर्च बिभिन्न दाताहरुबाट संकलीत रहेको सालीक निर्माण समितिका सदस्य तारानाथ भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
तस्बिरः रुपेश कोइरालाको फेश्बुकबाट